Ihe eji enyere ndi okenye | Relọ Nkwụghachi --gwọ - Lovehụnanya, Mmekọahụ na ịntanetị
Home Gbasara gị Ihe eji enyere ndi okenye aka
Na 'akụrụngwa maka ndị okenye' anyị wepụtara isi mmalite dị mma maka onye chọrọ ịhapụ omume lekwasịrị anya na porn.
Ofụbiga ihe ọ internetụ internetụ gabigara ókè na Intanet nwere ike ibute nsogbu ahụike na nke uche na ụfọdụ mmadụ.
Ezigbo ebe ịmalite bụ ige akụkọ banyere Gabe Deem, nwoke guzobere Mba Reboot. Nke a bụ Gabe na-ekwu okwu na ihe omume na Ibu ndi mmadu di iche iche: Nsogbu nke ihe omimi di omimi nye umuaka nwoke na nwoke maka National Center on Mmegbu Mmekọahụ na Washington DC (12.30).
Nchoputa gosiri na onu ogugu ndi nwere nsogbu di elu. Weebụsaịtị a na-enye ozi nwere ike inyere gị aka rụọ ọrụ ma ọ bụrụ na ojiji abụrụla nsogbu na ihe ị nwere ike mee ya. Ọ na - emetụta gị iche echiche or anụ ahụ ahụike? Ọ na - ebute nsogbu maka mmekọrịta? Ọ na-emetụta ikike gị uche n'ihe ọmụmụ gị ka ọ bụ n'ebe ọrụ? Na-elele ihe ị chọtara na mbụ na-asọ oyi ma ọ bụ ọ bụghị dakọtara ụdị mmekọahụ gị?
Ndị ọrụ ibe anyị na Eziokwu Eziokwu ahụ ewepụtala ihe nkiri dị egwu nke gbadoro ụkwụ na Jason na Ulysses site na akụkọ ifo ndị Gris nwere ọtụtụ echiche banyere otu esi zere ịkpọ oku nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ịntanetị (2.45).